Abanye Factory - China Abanye Abakhiqizi nabahlinzeki
Okuthile ongeke ukunake kakhulu empilweni kuyilapho bekuyizinto ezincane ongazisebenzisa ukwenza ngcono impilo yakho, yingakho izinto zokuphromotha nezipho kuvela, futhi uma kukhulunywa ngokuthatha into kube ngeyakho, bese uza kuPretty Izipho Ezicwebezelayo. Ukuba ngumkhiqizi okhokhelwayo, siyifektri elingamashumi eminyaka lokuhlangenwe nakho okuningi ezintweni ezenziwe ngokwezifiso zensimbi. Akunandaba ukuthi ungumklami noma cha, Izipho Ezicwebezelayo. ineqembu labaculi abaqeqeshiwe elizoyidweba, abasebenzi bethu abanamakhono nemishini bazobeka ukwakheka okuvela ephepheni kufezeke. Izinto ezinenkampani yakho noma igama lomkhiqizo ukuze uzuze indlela yokukhangisa ebiza izindleko noma ukhethe ukucubungula okungcono ukwenza okuthile okufana neziqeshana zemali, amamaki ezincwadi, imihlobiso, umaki we-ID ukwenza ikhwalithi eyodwa bese uyithumela njengezipho, imikhiqizo emikhulu efana neDisney, iCoca cola , McDonald's, Walmart, Starbucks, sikhethe, kungani kungenjalo wena?
Izimpawu Zencwadi NamaPhepha
Aluminium edluliselwe Baton